Imiboniso: UAna Lena Rivera kunye noDavid López Sandoval | Uncwadi lwangoku
Imiboniso: UAna Lena Rivera kunye noDavid López Sandoval
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, I zi ganeko, Inoveli, Inoveli emnyama, Imibongo
Ndamgxotha uFebruwari ndisiya ezimbini i ntetho zeencwadi ezahlukeneyo nababhali. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe Yintoni abafileyo bathi cwaka, Ukusuka kumbhali kunye nomnye umbhali kule bhlog UAna Lena Rivera. Kwaye nge 28 ndandise Ukubala, ukusuka kwimbongi yaseCordovan UDavid López Sandoval, ongafundanga nothanda ngokwenene. Ezi yayizizo ukubonakala kwam ngokweemeko zayo kunye neethoni.
1.1 Yintoni abafileyo bathe cwaka - Ana Lena Rivera
2.1 Ukubala kwakhona-UDavid López Sandoval
Yintoni abafileyo bathi cwaka -UAna Lena Rivera
NgoFebruwari 27. Ithala leencwadi likaFrancisco Umbral, eMajadahonda.
Ndandifuna ukudibana noAna ngokobuqu. Ukumnqwenelela okona kuhle kwincwadi yakhe yokuqala yokubhala kunye nale Torrente Ballester 2017 inoveli ephumeleleyo kwaye kuba usinika italente yakhe rhoqo kule bhlog. Kananjalo ukukuxelela kwaye mkhuthaze ukuba onwabele iminyhadala, utyikityo kunye nokunxibelelana nabafundi, abo bakwaziyo nabo bangakwaziyo.
Ndabelana ngamava akho, nangona ingekho kwisikali sakho. Kodwa, ukuba kube kanye kuphela, sonke esibhalayo kufuneka sibe kuloo ndawo, phambi kwabahlobo okanye abantu ongabaziyo abakufundayo okanye bakufumanise kwaye batyikitye ibali eliphume kwingcinga yakho. Kwimeko ka-Ana sele kukho amaxesha ambalwa kunye notyikityo, kunye nalawo aseleyo. Kwaye banokuthi babe ngathi bonke bangowokugqibela wama-27 kuloo nto ithala leencwadi kwidolophu yakhe, eyayikhona Ukuphuphuma kwabahlobo, obaqhelileyo kunye nabafundi abangaziwayo, uninzi lwabo ebesele eyifundile inoveli yakhe.
Isenzo (igama elithi "umsitho" lidla ngokundinika iinyibiba), ebeliqhutywa ngabantu ababephethe ivenkile yeencwadi UBlondes naye wafunda kaMajadahonda, yenzeka kwi ithoni ekhululekile kakhulu kunye neyonwabisayo. Incoko phakathi kwabahlobo ababini kunokuba phakathi kombhali, umthengisi weencwadi okanye umfundi we-beta, njengoko kwenzekileyo nombonisi ka-Ana.
Ngaloo ndlela, uphononongo oludumileyo lwencwadi, umxholo wayo, abalinganiswa kunye nemeko zitshintshiwe kunye neempendulo zemibuzo iyeza leyo. UAna wathetha ngayo yonke into ukusuka kwiminqweno yakhe yobuntwana bokubhala, kuye umsebenzi ophumeleleyo wobungcali njengomntu omdala njengomyalelo ophuma kwihlabathi lekhompyuter, kude kube uqeqesho lwakhe njengombhali Iphele ngokuqaqambileyo. Apha wandinika olu dliwanondlebe kutsha nje.
Wayethetha nangendlela yokuyila yale noveli kwaye ngawo onke amaxesha wayenxibelelana nabantu ababekho kwinkcazo-ntetho. Usimeme ukuba sibuze imibuzo okanye sithethe ngenoveli ngabo bebesele beyifundile, kucacile ukuba bebeziphepha izinto ezingafunwayo. Ngamafutshane, yayingumsebenzi osondeleyo, ovulekileyo nothatha inxaxheba, ephela ngokusayina okuqhelekileyo. Andikwazi ukuhlala kude kube sekupheleni, kodwa ndawuthatha loo mqondiso kunye nesithuba sam kunye nomlobi, ngokwemvelo. Kwaye sele ndiqalisile ukuyifunda loo nto Yintoni abafileyo bathi cwaka ngokubonakala okuhle.
1. Ukunikezelwa kuka-Ana Lena Rivera. Enkosi… 2. UDavid López Sandoval noLuis Alberto de Cuenca.
Ukubala -UDavid López Sandoval
NgoFebruwari 28th. Ivenkile yeNcwadi yaseNakama, kwisitalato iPelayo, eMadrid.
Ngosuku olulandelayo yayingumboniso wale nto imibongo emifutshane Yombongi endingayaziyo kodwa endiyithandayo kakhulu. Y wahluke kangakanani umzuzu, iatmosfera, abalinganiswa kunye nethoni.
ULópez Sandoval ngugqirha kwi-Hispanic Philology kunye noprofesa woLwimi kwaye sele epapashe inoveli, Uhambo oluya eParnassus, kunye neencwadi zemibongo IiCastaways o Uhambo lobuqhawe. Ngale nto Ukubala iphumelele I-XXXIV Ibhaso lesiBongo likaJaén Kwaye wayibeka kule venkile efihlakeleyo e-Chueca ebumelwaneni baseMadrid ngesandla sogqirha wezazi, imbongi, umbhali wemihlathi kunye nomhleli ULuis Alberto waseCuenca.
Kwaye njengakuyo nayiphi na ngokuhlwa kwemibongo kufanelekile ityuwa yayo Umoya ojikeleze umhlaba awunakuqokelelwa ngakumbi ngaphandle kwabancedisi be-2, ukuba bafikile, boboya obahlukeneyo phakathi oonjingalwazi befilosofi, ulwimi, uncwadi, iimvumi nakwezinye iinkalo. Kwaye omnye umbhali weprose wangena ngaphakathi njengam.
UDe Cuenca wayevalelwe, ecula iingoma zebard kunye nezalathiso zakudala kunye nababephila kwimibongo yesizwe, kunye nokunxibelelana nomculo nefilosofi. Uqwalasele umbongo kwaye wanika uburharha okanye isigqebelo emva koko wazisa imbongi.
Ingqokelela yemibongo kaSandoval ijongana nezihloko ezahlukeneyo apho i ukufa Kuzo zonke iintsingiselo okanye ubunyani bayo, kodwa ngokuchanekileyo uloyiko kunye nenkxalabo ephambi kwayo kukwathetha ukuba siyaphila kwaye sifuna ukuhlala njengoko injalo. Oko kukuthi, tKukwasibongozo sobomi imbongi inika iintlobo ezininzi njengakuyo iihaikus kunye neonnets. Kwaye ungabona ii-echoes ze ECernuda phezulu UGil de Biedma Kwaye kwanezona zakudala zamaGrike ziyathanda Heraclitus.
Le yenye yemibongo:
Nangona ngokuhlwanje iintlantsi zibaleka kumlilo
Umoya uvuthulula amasebe emithi,
nangona ngokuhlwanje ilitye liqengqa ezantsi
njengobusuku bonke bobomi bakho ukuza kuthi ga ngoku,
nangona mininzi iminqweno esalindelwe
ukuqhubeka nokukholelwa ukuba kukho icebo elingenasiphelo,
ngaphandle kwemigaqo okanye ithemba, ngaphandle koloyiko lokuba kwenzeka ntoni,
ngaphezu kwako konke zama ukonwaba.
Uyavuya kuba umlo wokufikelela phezulu
yanele ukugcwalisa intliziyo yomntu.
Ewe kunjalo, umbhali ufundile abanye baphendula (bambalwa, ewe) imibuzo evela kubazimasa. Iphantse yangaphezulu colloquium ezibandakanya ukusuka Ukubhekisa kwabo bakudala njengoHeraclitus (Yile nto unayo ukuba kukho abafilosofi abahlobo abakukhuthazayo okanye abakungenisayo) Nokuba kutheni iwongwe ngeNobel ukusuka kuNcwadi ukuya Bob Dylan kulunge nini ULeonard Cohen. Kwaye apho sicinga ukuba UBruce Springsteen utya iDylan kunye neCohen kunye neetapile kunye nesethup kuye kwafuneka silume inqindi lethu ukunqanda ukutsiba nalo Iintsuku zozuko.
Isenzo siyiphelisile utyikityo lweekopi y ukuya kusela wonke umntu, kubandakanya umbhali, ukuya kumdibaniso ophambi kwevenkile yeencwadi.
ukuba Kuya kufuneka uzame ukuya kuzo zonke iisaraos zoncwadi ezinokubakho kwaye ngeengqondo (hayi iintloko) zivulekile. Kuba zonke zinomdla. Ngomxholo, umbhali, iimeko kunye neetoni. Ayinamsebenzi. Umntu unokufumana izinto ezininzi ezimangazayo kwaye ahlangane nabantu bazo zonke iintlobo kunye neemeko, kodwa kunye nothando loncwadi kwimithambo yakhe nazo zonke iintlobo zalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » I zi ganeko » Imiboniso: UAna Lena Rivera kunye noDavid López Sandoval
UAgatha Christie: umdla wokubhala wencwadi yeNkosikazi enkulu yoLwaphulo-mthetho.
Iindaba ezi-5 ezihlukeneyo zokuhlela zenyanga kaMatshi